कोरोना संक्रमणको यस्तो छ अपडेट
काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ८७ लाख २ हजार ७३४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ लाख ५८ हजार भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि ६ लाख ९७ हजार १८९ जना पुगेको छ । हालसम्म १ करोड १९ लाख १७ हजार भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४९ लाख १८ हजार ४२० पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ७६ हजार भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । अमेरिकामा हालसम्म १ लाख ६० हजार २९० जनाको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा हालसम्म २८ लाख ८ हजार ७६ जना संक्रमित हुँदा ९६ हजार ९६ जनाको ज्यान गएको छ । भारतमा हालसम्म १९ लाख ६ हजार ६१३ संक्रमित हुँदा ३९ हजार ८२० जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा ८ लाख ६१ हजार ४२३ संक्रमित हुँदा १४ हजार ३५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा ५ लाख २१ हजार ३१८ जना संक्रमित हुँदा ८ हजार ८८४ जनाको ज्यान गएको छ । मेक्सिकोमा ४ लाख ४९ हजार ९६१ जना संक्रमित हुँदा ४८ हजार ८६९ को मृत्यु भएको छ । पेरुमा ४ लाख ३९ हजार ८९० जना संक्रमित हुँदा २० हजार ७ जनाको मृत्यु भएको छ । चिलीमा ३ लाख ६२ हजार ९६२ संक्रमित हुँदा ९ हजार ७४५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा संक्रमितको संख्या ३ लाख ४९ हजार ८९४ पुगेको छ भने २८ हजार ४९८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यता, इरानमा ३ लाख १४ हजार ७८६ जना संक्रमित हँदा १७ हजार ६१७ जनाको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा हालसम्म ४६ हजार २९९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ लाख ६ हजार २९३ जना संक्रमित रहेका छन् । साउदी अरबमा २ लाख ८१ हजार ४५६ हजार संक्रमित हुँदा २ हजार ९८४ जनाको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानमा २ लाख ८० हजार ४६१ संक्रमित हुँदा ५ हजार ९९९ जनाको ज्यान गएको छ । इटालीमा संक्रमितको संख्या २ लाख ४८ हजार ४१९ पुग्दा ३५ हजार १७१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बंगलादेशमा हालसम्म २ लाख ४४ हजार २० संक्रमित हुँदा ३ हजार २३४ को मृत्यु भएको छ । टर्कीमा २ लाख ३४ हजार ९३४ संक्रमित हुँदा ५ हजार ७६५ को ज्यान गएको छ । जर्मनीमा २ लाख १२ हजार ३३१ जना संक्रमित हुँदा ९ हजार २३२ जनाको मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा संक्रमित १ लाख ९२ हजार ३३४ हुँदा ३० हजार २९६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा २७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८४ हजार ४९१ जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ । जापानमा ३९ हजार ८५८ जना संक्रमित हुँदा १ हजार १६ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म २१ हजार ९ जना संक्रमति फेला पर्दा १५ हजार २६ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । ५८ जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तको कसले बेच्न खोज्दैछ १६ हजार ५१० कित्ता सेयर ?
एफपीओ तयारीमा रहेको एनआरएन लघुवित्तले कहिले गर्दैछ बुक क्लोज ?
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड १ र २ को बुक क्लोज मिति तय, कहिलेसम्म सुरक्षित गर्ने लाभांश ?
एनएमबि हाइब्रिड फन्ड एल–१ को सेयर बजारमा लगानी १०.३७% ले बढ्यो
युनाइटेड इदी मर्दीको आइपीओ खुला